August 9, 2020 657
लकडा’उनका कारण घर जान नपाएका एक यु’वक काठमाडौंमा साग चो’रि गरेको अभियोगमा निर्घा’त कु’टि’एका छन् । उनलाई सागधनीले हात खुट्टा बाँ’धेर कु’टे’का हुन् । उनको तस्बिर सामा’जिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ ।
लकडाउनका कारण घर जान नपा:एका उनी वेरो’जगार भएका छन् । पेट भर्ने अरु कुनै उपाय नपाएर साग चोरी गर्न बारीमा पुगेका उनलाई सागधनीले फे:ला पारेपटि कु’टे’का हुन् ।
उनलाई हात खुट्टा बाँ’धेर बारीमै ल’डा’एर कु’टि’एको तस्बिरवाट पुष्टि हुन्छ । यो काठमाडौ कुन ठाउँको हो भन्ने खु’लेको छैन । एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै साग चोरीको आरोपमा यति ठूलो स’जा’य दिनेलाई कार:वाही माग गरेका छन् ।
उनले भुपेन्द्र खड्का को ट्वीटर ह्याण्डलवाट सार्वज’निक भएको यो तस्बिरमा उनले लेखेका छन्, ‘लकडाउनमा घर जान नपाएर काठमाडौंमै थु’नि’एका कालिकोटका युवा साग चोरी’को आरोपमा नि’र्घा’त कु’टि’एका छन्,भोकले अ’प’रा’ध जन्माउँछ तर उनको अ’प’रा’धै भए पनि ज’घ’न्य होइन, कति हजारको साग चोरे उनले ?
साग धनीलाई क्षति’पूर्ति र सागचोर भाइलाई कालिकोट पुर्‍याउने खर्च मेरो तर्फबाट’ भन्दै एक ट्विटर प्रयोग कर्ता भुपेन्द्र खड्काले लेखेका छन । उनले यो काठमाडौको कुन ठाउँमा भएको घ’टना हो भन्ने कुरा भने उल्ले’ख गरेका छैनन् ।
लामो समय देखिको लकडाउनका कारण का’ठमाडौमा रोज:गारीका लागि आएका युवा यु’वती वेरोजगार बनेका छन् । अहिले सामान्य वजार खुलेको भएपनि ब्यपापार ब्यवसाय नचले’का कारण काम पाइएको छैन ।
लामो दुरीको यातायात सञ्चा’लन नहुँदा आफ्नो घर समेत जान नपाएका छैनन् । काठमाडौमा भोक भोकै भएका यु’वा युवती कुलतमा लाग्ने खतरा पनि बढे’को छ । भोक’ र गरिबीले चोरीका घ:टना बढ्ने अनुमान लगा’उन सकिन्छ । – ताजा खबर
Prevनायिका शुष्मा कार्कीको भेट पूर्वयुवराज पारस शाह सँग…
Nextसाल-नाल सहित झाडीमा फालेको अवस्थामा शिशुको जिवि’तै उद्धार (भिडियो सहित)
एमाले एक्लैले जित्यो ६ पालिका, गठबन्धनले कति पालिका जित्यो ? (सूचीसहित)
नेपालमा एक सांसदमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टी [कोरोना अपडेट]